Zvapupu zvaJehovha—Mushumo Wenyaya Dzemumatare
Russia: Kuparidza mashoko akanaka muMoscow
Kunyoresa Zviri Pamutemo
Zvapupu zvaJehovha hazvisungirwi kunyoresa zviri pamutemo kuti zvikwanise kuita mabasa echiKristu. Zvisinei, kunyoresa kunoita kuti tikwanise kuva nedzimba dzedu dzekushandisa pakunamata kana kuti dzekurenda uyewo kuti tikwanise kupinza mabhuku edu munyika.
Muna 2004, matare emuRussia akavhara sangano repamutemo raishandiswa neZvapupu zvaJehovha muMoscow. Izvi zvakaita kuti hama dzedu dzemuMoscow dzitange kupikiswa zvakaoma. Vaishungurudzwa nemapurisa, vairohwa nevanhu muushumiri, uye varidzi venzvimbo dzaishandiswa pakunamata vakabva varamba kuti Zvapupu zvishandise nzvimbo dzavo, saka hama dzedu dzakasara dzisina pekupindira misangano. Muna 2010 dare reEuropean Court of Human Rights (ECHR) rakapa mutongo wokuti Russia yakanga yatyora kodzero dzeZvapupu zvaJehovha muMoscow uye rakati sangano razvo repamutemo rivhurwe. Tinofara kuzivisa kuti musi wa27 May 2015, Dhipatimendi reRussian Federation Ministry of Justice riri muMoscow rakanyoresa sangano idzva reLocal Religious Organization of Jehovah’s Witnesses muMoscow.
Kazhinji masangano anoshandiswa neZvapupu zvaJehovha pasi rese haabhadhari mitero sezvinongoitawo mamwe masangano akawanda ezvitendero nemamwewo anobatsira vanhu. Asi dzimwe nguva hurumende dzinoti tinofanira kubhadhara mitero.
MuSweden, vakuru vehurumende vakaramba kuti Bheteri inzvimbo inoitwa zvechitendero ine vashumiri venguva yakazara, asi vakati inzvimbo yebhizimisi inotopinzwa vanhu basa. Hurumende yakataura mutero waifanira kubhadharwa nebazi uye munhu mumwe nemumwe aiva paBheteri, uye mari yacho yakasvika makumi ezviuru zvemaeuro. Kuti nyaya iyi igadziriswe, Zvapupu zvemuSweden zvakaendesa nyaya yacho kumatare emo uye zvakanyorera dare reECHR ka6 zvichikumbira kuti riongorore nyaya yacho.
Kusapindira Mune Zvematongerwo Enyika Uye Kusapinda Muchiuto Pamusana Pehana
Vanhu vaJehovha vanokoshesa chaizvo murayiro weBhaibheri unoti vapfure “mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo” uye kuti ‘vasadzidzazve kurwa.’ (Isa. 2:4) Vanoramba vasingapindiri mune zvematongerwo enyika kunyange zvazvo dzimwe hurumende dzichiramba kuti vaite mamwe mabasa ehurumende asiri echiuto.
Mutemo uri kushanda muSouth Korea pari zvino unoti hapana munhu anofanira kuramba kupinda muchiuto achiti hana yake haimubvumiri. Mumakore 60 adarika, Zvapupu zvinopfuura 18 000 zvakakandwa mujeri nemhaka yekuramba kupinda muchiuto. Kunenge kuti Chapupu chimwe nechimwe chiri munyika iyi chine hama kana shamwari yakamboiswa mujeri. Mugore ra2004 nera2011, dare reConstitutional Court of South Korea rakati kuisa vanhu mujeri saizvozvo kunoenderana nezviri mubumbiro remutemo. Zvisinei, muna July 2015 Dare racho rakabvunza ruzhinji rwevanhu nezvenyaya yacho kuti riiongorore zvakare. Pasi rese, Zvapupu zvaJehovha zviri kunyengeterera kuti nyaya iyi yava nenguva yakareba igadziriswe, kuitira kuti hama dzedu muSouth Korea dzisaramba dzichiiswa mumajeri pamusana pezvadzinotenda.
Varume vatatu vekuEritrea avo vari Zvapupu zvaJehovha vava mugore rechi22 vari mujeri nemhaka yekuti hana dzavo hadzivabvumiri kuita basa rechiuto. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, naIsaac Mogos vakangokandwa mujeri vasina kana mhosva yavaipomerwa uye havana kumbobvira vapiwa mukana wekuzvidzivirira mudare. Hama idzi pamwe chete nedzimwe hama nehanzvadzi dzinopfuura 50, dziri kuramba dzakaperera pasinei nekuti hadzisi kubatwa zvakanaka uye dziri mumamiriro ezvinhu akaipisisa mumajeri. Tine chokwadi chekuti Jehovha ‘anonzwa kugomera’ kwevaya vari kuiswa mumajeri nemhaka yekutenda kwavo uye kuti achavabatsira.—Pis. 79:11.
Panguva yaitorwa vanhu kuti vapinde muchiuto kuUkraine muna August 2014, Vitaliy Shalaiko akashevedzwawo. Akaramba kuita basa rechiuto nekuti hana yake yakamurambidza, asi akati aizobvuma kuita mamwe mabasa ehurumende asiri echiuto. Muchuchisi akapomera Hama Shalaiko mhosva yekuti vaida kungonzvenga kuita basa rechiuto, asi dare rakatonga nyaya yacho nedare rinotonga nyaya inenge yakwidzwa, ese akati Hama Shalaiko havana mhosva. Dare rinotonga nyaya inenge yakwidzwa rakati kuda kudzivirira nyika hakufaniri kuita kuti munhu atorerwe kodzero dzake uye kuti “kodzero yemunhu yekuramba kupinda muchiuto pamusana pehana haichinjwi nekuti nyika inofanira kudzivirirwa.” Muchuchisi uya akakwidza zvakare nyaya yacho. Musi wa23 June 2015, dare reHigh Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases rakatsigira mutongo wakanga wapiwa nematare epasi. Izvi zvakabva zvaratidza kuti kodzero yemunhu yekuramba kupinda muchiuto pamusana pehana asi achibvuma kuita rimwe basa rehurumende, inoshandawo kunyange zvinhu pazvinenge zvisina kugadzikana munyika.
Ukraine: Vitaliy Shalaiko ari muushumiri
Vachitaura nezvekukunda kwavakaita mumatare acho, Hama Shalaiko vanoti: “Ndakakurudzirwa nemashoko ari pana Jeremiya 1:19. Ndainge ndakagadzirira chero zvaizoitika, chainyanya kukosha ndechokuti ndirambe ndakatendeka kuna Jehovha. Ndine chokwadi chokuti haazombondisiyi asi achandipa simba kuti ndirambe ndakatendeka. Asi, zvakaitika panguva iyoyo ndakanga ndisingambozvitarisiri. Ndakapinda mumatare matatu asi ndakawanikwa ndisina mhosva mumatare acho ese. Uye pese pandaipinda mudare, hama dzainditsigira. Handina kumbonzwa sekuti ndakanga ndasiyiwa ndega.”
Kusatsigira Zvematongerwo Enyika Uye Mhemberero Dzenyika
Mhemberero dzenyika ndidzo dzimwe dzinoita kuti zviomere vaKristu kuti vasatsigira zvematongerwo enyika. Vechiduku vanogona kuiswa pamuedzo wekuti vasaramba vakaperera kuna Jehovha nekuti vakuru vezvikoro vanogona kumanikidza vana vechikoro kuti vaimbe rwiyo rwenyika kana kuti kusaruta mureza.
Munharaunda yeKarongi kuRwanda, vakuru vechikoro vakapomera vana veZvapupu vakati wandei mhosva yekuti vakanga vasiri kuremekedza rwiyo rwenyika nekuti vairamba kurwuimba. Vana vacho vakadzingwa chikoro uye vamwe vakatoiswa mujeri. Musi wa28 November 2014, dare reIntermediate Court of Karongi rakasunungura vana vacho uye rakagumisa kuti hazvinganzi vakanga vasiri kuremekedza pavakaramba kuimba rwiyo rwenyika. Mune dzimwe nyika dzemuAfrica dzakadai seCameroon, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea uye Malawi, Zvapupu zvechidiki zviri kusangana nemuedzo wakangofanana naiwoyo uye pamwe pacho zvichitodzingwa chikoro. Hama dzedu dziri munyika idzi dziri kuita zvese zvadzinogona kuti dzizivise vakuru vehurumende nevakuru vezvikoro kuti Zvapupu zvaJehovha hazvitsigiri zvematongerwo enyika.
Honduras: Mirna Paz naBessy Serrano vakazopiwa madhipuroma avo
Muna December 2013, Zvapupu zvaidzidza pane chimwe chikoro muLepaera, kuHonduras zvakanyimwa madhipuroma azvo nemhaka yekuti zvakaramba kuimba rwiyo rwenyika nekusaruta mureza. Kuti nyaya yacho igadziriswe, Zvapupu zviviri zvinoshanda semagweta zvakanoonana nemumiririri weBazi reDzidzo uye vakataura naye nezvekutsigirwa kwakaitwa vana veZvapupu mune dzimwe nyika pakatongwa dzimwe nyaya dzakafanana naiyoyo. Mumiririri wacho akataura navo zvakanakanaka uye akabvuma kuti vana vacho nevabereki vavo vaite zvekunyora pasi chichemo chavo choendeswa kumukuru mukuru anoona nezvemutemo muBazi reDzidzo kuHonduras. Mukuru mukuru wacho akaongorora chichemo chavo uye musi wa29 July 2014 akazotaura kuti “vanhu vese vanofanira kuwana dzidzo pasina kana rusaruro” uye akati Zvapupu zvacho zvaifanira kupiwa madhipuroma azvo.
Pasinei nekuti tiri munyika ipi, seZvapupu zvaJehovha tinoteerera murayiro waJesu wekuti tiparidze mashoko akanaka eUmambo kuvavakidzani vedu, tiungane nevamwe vedu tichinamata pamwe chete, uye tigare tichidzidza Shoko raMwari. Tinokoshesawo murayiro uri muBhaibheri wekuti tinofanira kuroverera mitemo yaJehovha mumwoyo yevana vedu uye kuti tinofanira ‘kurega ropa.’ (Mab. 15:20; Dheut. 6:5-7) Dzimwe nguva kuteerera kwatinoita mirayiro iyi kunoita kuti tipesane nevakuru vakuru vehurumende avo vanogona kutadza kutinzwisisa.
KuFlorida, U.S.A., mumwe mutongi akapa mutongo wekuti vamwe amai vakanga vasiri Chapupu ndivo chete vaiva nekodzero yekudzidzisa vana vavo vatatu zvinhu zvine chekuita nechitendero. Baba vacho, avo vari Chapupu vakarambidzwa kudzidzisa vana vavo zvinhu zvisingaenderani nezvinodzidziswa nechechi yeRoma. Vakabva vakwidza nyaya yavo kune rimwe dare raiva pamusoro uye musi wa18 August 2014, dare racho rakachinja mutongo wakanga wapiwa nedare rekutanga. Richishandisa mitongo yakambopiwa kare panyaya dzakadai, dare racho rakanyora kuti: “Kurambidza mubereki anenge asingagari nemwana wake kuti amudzidzise zvaanotenda, kwagara kuchichinjwa kana pasina umboo hwakajeka hunoratidza kuti zvinhu zviri kunzi mwana wacho aite zvinomukanganisa.”
Mutongo uyu unopa vana vacho kodzero yekuti vadzidziswe uye vatungamirirwe nemitemo yaJehovha Mwari inobatsira, pasina anovavhiringidza. Iye zvino, vese vari kufambira mberi chaizvo pakunamata vari muungano yekwavanogara. Baba vacho vakati: “Kutsungirira muedzo uyu kuri kundisimbisa zvechokwadi. Ndakasangana nemiedzo yakati kuti mazuva apfuura aya, asi Jehovha akandibatsira kuti ndirambe ndakasimba! Ndinoziva kuti patinosarudza kushumira Jehovha, tinenge tichitosarudzawo kutambudzwa.”
Namibia: Efigenia Semente nevana vake vatatu
Hanzvadzi Efigenia Semente vanogara kuNamibia, avo vane vana vatatu, vakasangana nemuedzo mukuru. Pavaiva muchipatara vachisununguka mwana wavo wechitatu, zvinhu zvakanetsa uye hama dzavo nevamwe vanachiremba vakaenda kudare vakanopiwa gwaro raivamanikidza kuwedzerwa ropa. Hanzvadzi Semente vakatsika madziro uye vakaendesa nyaya yacho kumatare kuti vadzivirire kodzero yavo yekusarudza marapirwo avanoda. Musi wa24 June 2015, Dare Repamusorosoro remuNamibia rakatonga richitsigira zvakataurwa naHanzvadzi Semente richiti “munhu mumwe nemumwe ane kodzero yekusarudza zvaanoda kuti zviitwe pamuviri wake, pasinei nekuti mubereki [ane pamuviri] here kana kuti kwete, uye hapana anofanira kumutorera kodzero iyoyo.” Hanzvadzi Semente vakati: “Tainzwa kuti Jehovha anesu kutopfuura zvataiita kare. Zvinofadza chaizvo kuva musangano iri. Zvechokwadi Jehovha ane hanya nesu.”
Zvapupu zvemuSwitzerland zvanga zvichinakidzwa nekuparidza mumigwagwa yemaguta makuru. Zvisinei, muguta reGeneva makarambidzwa kushandisa “matafura paruzhinji pakuparadzira mashoko ezvechitendero.” Zvapupu zvakaendesa nyaya yacho kudare, zvichisimbisa kuti kungorambidza vanhu kuparadzira mashoko echitendero pachishandiswa matafura “kunotyora kodzero ine vanhu yerusununguko rwekunamata uye rwekutaura zvavanofunga.” Dare racho rakabvumirana nazvo uye Zvapupu zvakashanda nevakuru vakuru veguta racho kuti vawirirane kuti inzvimbo ipi nenguva pavanokwanisa kuparidza paruzhinji vachishandisa matafura.
Vakuru vakuru vehurumende muAzerbaijan vari kuramba vachiwedzera kuomesera Zvapupu zvaJehovha kuti zvitadze kuita basa razvo. Bazi Rinoona Nezvekudzivirirwa Kwenyika rinogara richishevedza Zvapupu richizvibvunzurudza. Bazi iri rinopotawo richienda mudzimba dzeZvapupu richitsvaga mabhuku echitendero asingabvumirwi nehurumende kupinda munyika yacho. Muna February 2015, dzimwe nyika dzakashamisika chaizvo bazi racho parakavharira mujeri Zvapupu zviviri, Irina Zakharchenko naValida Jabrayilova nemhaka yekungokurukura nevavakidzani vavo zvinodzidziswa neBhaibheri. Kunyange zvazvo zvichitirwadza kuti vaparidzi vari muAzerbaijan vari kubatwa zvisina kunaka, chinotifadza ndechekuti vari kuramba vachishingaira pakuparidza “mashoko akanaka eUmambo” neushingi kuvavakidzani vavo.—Mat. 24:14.
Zvapupu zvaJehovha zvekuRussia zviri kuramba zvichivhiringidzwa nehurumende pakuita mabasa azvo ekunamata. Kutaura kuno, hurumende yeRussia yakati mabhuku 80 eZvapupu zvaJehovha anokurudzira kupandukira hurumende. Izvi zvinoreva kuti kuparadzira kana kuti kungova nemabhuku aya, akaita seBhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri, kutyora mutemo. Uyewo, muna December 2014, Dare Repamusorosoro reRussia rakati nzvimbo yedu yepaIndaneti yejw.org, inokurudzira kupandukira hurumende. Makambani ese eIndaneti muRussia akaita kuti Indaneti dzawo dzisavhure jw.org, uye kuishambadzira kunonzi hakusi pamutemo. Kubvira muna March 2015, vanoona nezvekupinda kwezvinhu munyika havasi kubvumira mabhuku chero api zvawo eZvapupu kupinda munyika yacho. MaBhaibheri nemamwe mabhuku ari kurambidzwawo, kunyange zvazvo akaendeswa kumatare emuRussia zvikaonekwa kuti haakurudziri kupandukira hurumende.
Muguta reTaganrog, nyaya yevaparidzi 16 avo vari kunzi nevakuru vakuru vane mhosva yekuronga uye kupinda misangano yechitendero, iri kuendeswa kumatare. Muguta reSamara, vakuru vakuru vakaenda kudare kunopiwa gwaro rekuti vavhare sangano redu repamutemo vachiti rinokurudzira kupandukira hurumende. Pasinei nemiedzo yese iyi, hama nehanzvadzi dzedu muRussia dzakatsunga kupa “zvinhu zvaMwari kuna Mwari,” dzisingakandi mapfumo pasi.—Mat. 22:21.